Matio (evanjily) - Wikisource
(Redirected from Matio 1)
1 Matio 1
2 Matio 2
3 Matio 3
4 Matio 4
5 Matio 5
6 Matio 6
7 Matio 7
8 Matio 8
9 Matio 9
10 Matio 10
11 Matio 11
12 Matio 12
13 Matio 13
14 Matio 14
15 Matio 15
16 Matio 16
17 Matio 17
18 Matio 18
19 Matio 19
20 Matio 20
21 Matio 21
22 Matio 22
23 Matio 23
24 Matio 24
25 Matio 25
26 Matio 26
27 Matio 27
28 Matio 28
1 Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama.
2 Abrahama niteraka an'i Isaka; ary Isaka niteraka an'i Jakoba; ary Jakoba niteraka an'i Joda mirahalahy avy ;
3 ary Joda niteraka an'i Fareza sy Zara tamin'i Tamara ; ary Fareza niteraka an'i Jezrona ; ary Jezrona niteraka an-dRama ;
4 ary Rama niteraka an'i Aminadaba ; ary Aminadaba niteraka an'i Nasona ; ary Nasona niteraka an'i Salmona ;
5 ary Salmona niteraka an'i Boaza tamin-dRahaba ; ary Boaza niteraka an'i Obeda tamin-dRota ; ary Obeda niteraka an'i Jese ;
6 ary Jese niteraka an'i Davida mpanjaka. Ary Davida niteraka an'i Solomona tamin'ny vadin'i Oria ;
7 ary Solomona niteraka an-dRehoboama ; ary Rehoboama niteraka an'i Abia ; ary Abia niteraka an'i Asa ;
8 ary Asa niteraka an'i Josafata ; ary Josafata niteraka an'i Jorama ; ary Jorama niteraka an'i Ozia ;
9 ary Ozia niteraka an'i Ahaza ; ary Ahaza niteraka an'i Hezekia ;
10 ary Hezekia niteraka an'i Manase; ary Manase niteraka an'i Amona ; ary Amona niteraka an'i Josia ;
12 Ary taorian'ny nifindrana tany Babylona Jekonia dia niteraka an'i Sealtiela ; ary Sealtiela niteraka an'i Zerobabela ;
13 ary Zerobabela niteraka an'i Abihoda ; ary Abihoda niteraka an'i Eliakima ; ary Eliakima niteraka an'i Azora ;
14 ary Azora niteraka an'i Akima ; ary Akima niteraka an'i Elihoda ;
15 ary Elihoda niteraka an'i Eleazara ; ary Eleazara niteraka an'i Matana ; ary Matana niteraka an'i Jakoba ;
16 ary Jakoba niteraka an'i Josefa, vadin'i Maria ; ary Maria niteraka an'i Jesosy, Izay atao hoe Kristy.
17 Ary ny taranaka rehetra hatramin'i Abrahama ka hatramin'i Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo; ary hatramin'i Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babylona dia taranaka efatra ambin'ny folo; ary hatramin'ny nifindrana tany Babylona ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo.
18 Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao : Rehefa nanaiky Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin'ny Fanahy Masina izy.
20 Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe : Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao ; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina,
21 ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe JESOSY ; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany.
22 Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe :
23 "Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy ; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela " ( Isa . 7.14 ), izany hoe, raha adika : " Amintsika Andriamanitra . "
24 Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian'ny anjelin'ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny.
1 Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema an'i Jodia, tamin'ny andron'i Heroda mpanjaka, indreo, nisy Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe:
4 Dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: Aiza moa no hahaterahan'i Kristy?
6 "Ary hianao, ry Betlehema, tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda hianao tsy akory; Fa avy ao aminao no hivoahan'izay anankiray ho Mpanjaka, Ka Izy no ho Mpiandry ny Isiraely oloko" (Mik.5.1).
8 Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe : Andeha, fotory tsara ny amin'ilay Zazakely ; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatrehany.
9 Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa ; ary, indro, ilay kintana hitany teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny Zazakely.
12 Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'i Heroda, dia làlana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
13 Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe : Mifohaza hianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Egypta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao; fa Heroda efa hitady ny Zazakely hovonoiny.
15 ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda, mba hahatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: " Nantsoika hiala tany Egypta ny zanako " ( Hos. 11.1)
16 Ary nony fantatr'i Heroda fa voafitaky ny Magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no ho midina, izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny Magy.
17 Dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe :
18 " Nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra ; Rahely nitomany ny zanany, ary tsy azo nampiononina izy, satria lany ritra ireny " ( Jer. 31.15)
19 Ary rehefa maty Heroda, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Josefa tany Egypta tamin'ny nofy ka nanao hoe :
20 Mifohaza ianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, dia mankanesa any amin'ny tanin'ny Isiraely ; fa efa maty izay nitady ny ain'ny Zazakely .
23 Ary nony tonga tany izy, dia nonina tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe : " Hatao hoe Nazarena Izy. "
1 Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona Mpanao-batisa, nitory tany an-efitr' i Jodia nanao hoe:
2 Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
3 Fa izy no ilay nampilazaina an' i Isaia mpaminany hoe: " Injany! misy feon'ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan'i Jehovah, Ataovy mahitsy ny làlan-kalehany" ( Isa. 40.3)
8 Koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana hianareo ;
10 Ary, indro, efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky ; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo,
11 Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana ; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho ; Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo ;
12 eny an-tànany ny fikororohany, ary Izy hanadio tsara ny eo am-pamoloany ka hanangona ny variny ho any an-tsompitra ; fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty
14 Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe : Izaho no tokony hataonao batisa, ka Hianao indray va no mankaty amiko ?
16 Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay Izy ; ary , indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny.
1 Ary Jesosy dia nentin'ny Fanahy nankany an-efitra, mba halain'ny devoly fanahy.
3 Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra Hianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto.
4 Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: Voasoratra hoe: "Tsy mofo ihany no hiveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra" (Deo.8.3).
5 Ary ny devoly nitondra Azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra Azy teo an-tampon'ny tempoly,
6 dia nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra Hianao, mianjerà any ambany any; fa voasoratra hoe: " Izy handidy ny anjeliny ny aminao; ary eny an-tànany no hitondran'ireo Anao, fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao" (Sal .91.11.12).
7 Hoy Jesosy taminy: Voasoratra hoe koa: "Aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitrao" (Deo.6.16).
10 Fa hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ry Satana: fa voasoratra hoe; " Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao" (Deo.6 13).
14 mba hahatanteraka izay nampilazaina an' Isaia mpaminany hoe:
15 "Ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin' i Jordana, Galilia, tanin'ny jentilisa,
16 Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe; Ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana" ( Isa.8.23; 9.1).
17 Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
19 Dia hoy Jesosy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona hianareo.
21 Ary raha mbola nandroso Izy, dia nahita olona mirahalay hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio, sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny haratony; ary niantso azy mirahalahy Izy.
24 Ary niely eran'i Syria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra, izay azon'ny aretina maro samy hafa sy ny fangirifiriana, dia ny demoniaka sy izay mararin'ny androbe ary ny mararin'ny paralysisa, ka nahasitrana ireny Izy.
1 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy , dia nanatona Azy ny mpianany.
4 Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina;
5 Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova no tany (Sal.37.11).
8 Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an' Andriamanitra.
9 Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak' Andriamanitra.
10 Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra;
11 Sambatra hianareo, raha haratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko.
12 Mifalia sy miravoravoa hianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.
13 Hianareo no fanasin'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahan'ny olona.
15 Ary koa, tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany.
18 Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak'izy rehetra.
19 Ary amin'izany na zovy na zovy no mamaha ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia hatao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy na zovy no mankato sy mampianatra ireo dia izy no hatao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra.
20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy hianareo.
21 Efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo hoe:" Aza mamono olona" (Eks.20.13); ary izay mamono olona dia mendrika hohelohina amin'ny fitsarana.
22 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hohelohina amin'ny fitsarana; ary na zovy na zovy no hanao amin'ny rahalahiny hoe : Olom-poana hianao, dia mendrika hohelohina amin'ny Synedriona; ary na zovy na zovy no hanao hoe: Foka ialahy, dia mendrika ho ao amin'ny helo mirehitra afo.
23 Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara hianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao,
25 Mihavàna faingana amin'ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy hianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka hatao ao an-trano-maizina hianao.
26 Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy hianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra.
27 Efa renareo fa voalaza hoe: " Aza mijangajanga" (Eks.20.14).
29 Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao; ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin'ny helo.
30 Ary raha ny tànanao ankavanana no manafintohina anao, dia tapaho izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ho lasa ho any amin'ny helo.
31 Ary voalaza hoe : Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome an-dravehivavy taratasy fisaoram-bady ( Deo.24.1).
33 Ary koa, efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo hoe: Aza mianian-tsy to, fa efao amin'i Jehovah ny fianiananao (Lev.19.12).
34 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe : Aza mianiana akory: na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany;
36 Aza mianiana amin'ny lohanao; fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza hianao.
37 Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy.
38 Efa renareo fa voalaza hoe: " Maso solon'ny maso, ary nify solon'ny nify" (Eks.21.24).
39 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray.
40 Ary izay te-hiady aminao ka ta-haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao.
41 Ary na zovy na zovy no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa.
42 Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te-hisambotra aminao.
43 Efa renareo fa voalaza hoe: " Tiava ny namanao" (Lev.19.18), ary mankahalà ny fahavalonao.
45 mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina.
48 Koa amin'izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan'ny Rainareo Izay any an-danitra.
1 Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona hahitany izany; fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pitia amin'ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo.
2 Koa amin'izany, raha manao fiantrana hianao, aza mba mitsoka trompetra eo anolohanao tahaka ny fanaon'ny mpihatsaravelatsihy eo amin'ny synagoga sy eny an-dàlambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
3 Fa hianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tànanao ankavia izay ataon'ny tànanao ankavanana,
5 Ary raha mivavaka hianao, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy; fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny synagoga sy eo an-joron-dàlana hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
5 Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina ; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao.
7 Ary raha mivavaka hianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; fa ataony ho ny hamaroan'ny teniny no hihainoana azy.
9 Koa amin'izany mivavaha toy izao hianareo: Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao.
10 Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
12 Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
13 Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy.
14 Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra.
15 Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona hianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo.
16 Ary raha mifady hanina hianareo, aza mety ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay malahelo tarehy; fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
17 Fa hianao kosa, raha mifady hanina, dia hosory ny lohanao, ary sasao ny tavanao,
19 Aza mihary harena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra.
22 Ny maso no jiron'ny tena; koa amin'izany, raha tsara ny masonao; dia hazava avokoa ny tenanao rehetra.
24 Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy Mamôna hianareo.
25 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo, dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana?
26 Tsinjovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny; ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va hianareo?
27 Ary iza ao aminareo, na dia manahy aza, no mahay manampy ny andro hiainany na dia kely monja aza?
28 Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana hianareo? Diniho tsara ny fanirin'ny vonin-kazo any an-tsaha; tsy mba miasa na mamoly ireny;
30 Ary raha ny ahitra any an-tsaha, izay any ihany anio ka hatsipy ao am-patana rahampitso, no ampitafin'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va hianareo, ry kely finoana?
31 Dia aza manahy hianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay? na: Inona no hosotroinay? na: Inona no hotafianay?
34 Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso hianareo; fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy.
1 Aza mitsara, mba tsy hotsaraina hianareo.
3 Ary nahoana hianao no mijery ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao?
4 Ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalahinao hoe: Aoka aho hanaisotra ny sombin-kazo eo amin'ny masonao; nefa indro, ny andry eo amin'ny masonao?
6 Aza omena ny alika izay masina; ary aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vato soanareo, fandrao hanitsaka azy izy, dia hifotitra ka hamiravira anareo.
7 Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dòndòny, dia hovohana hianareo.
8 Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandòndòna no hovohana.
11 Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy?
12 Koa amin'izany na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany fa izany no lalàna sy mpaminany.
13 Midira amin'ny vavahady èty hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny làlana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any.
14 Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.
15 Mitandrema hianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy.
22 Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko , tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay?
23 Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory hianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, hianareo mpanao meloka.
3 Ary Jesosy naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mety Aho; madiova hianao. Dia nadio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy.
4 Ary hoy Jesosy taminy: Tandremo mba tsy hilaza amin'olona na dia iray akory aza hianao; fa mandehana, misehoa amin'ny mpisorona, ka mitondrà ny fanatitra izay nandidian'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo.
8 Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafon-tranoko aho; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko.
12 fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana any amin'ny maizina any ivelany; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroha-nify.
14 Ary Jesosy, nony niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafozambavin'i Petera nandry teo nanavin'ny tazo.
17 mba, hahatanteraka izay nampilazaina an'Isaia mpaminany hoe: " Izy naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika" (Isa.53.4).
18 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka betsaka manodidina Azy, dia nanome teny hiala ho eny am-pita.
20 Fa hoy Jesosy taminy: Ny amboahaolo manan-davaka; ary ny voro-manidina manana fialofana; fa ny Zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahan'ny lohany.
26 Ary hoy Izy taminy: Nahoana no saro-tahotra hianareo, ry kely finoana? Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro.
27 Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re Io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky Azy?
28 Ary nony tonga teny am-pita teo amin'ny tanin'ny Gadarena Izy, dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy, nivoaka avy teny amin'ny fasana, sady masiaka loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany làlana izany.
29 Ary, indro, niantso izy ka nanao hoe: Moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Zanak'Andriamanitra ô? Tonga etỳ va Hianao hampijaly anay alohan'ny fotoana?
32 Ary hoy Izy taminy: Mandehana. Dia nivoaka ireo, ka lasa nankany anatin'ny kisoa; ary, indreny, ny kisoa andiany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina, ka dia maty tany anatin'ny rano,
2 Ary, indro, nisy lehilay anankiray mararin'ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy; ary Jesosy, nony nahita ny finoan'ireo, dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa hoe: Matokia, anaka; voavela ny helokao.
3 Ary, indreo, ny mpanora-dalàna sasany nanao anakampo hoe: Miteny ratsy ity Lehilahy ity.
4 Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia nanao hoe: Nahoana hianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo?
6 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka (dia hoy Izy tamin'ilay mararin'ny paralysisa): Mitsangana, betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao.
9 Ary nony niala teo Jesosy, dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy; Andeha hanaraka Ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka Azy.
13 Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: " Famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra" (Hos.6.6); fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota.
15 Ary hoy Jesosy taminy: Moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra, raha mbola ao aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy.
18 Raha mbola nilaza izany taminy Izy, indro, tonga ny mpanapaka anankiray, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Maty ankehitriny izao ny zanako-vavy; fa andeha re, mametraha ny tànanao aminy, dia ho velona izy.
20 Ary, indro, nisy vehivavy anankiray, izay efa nararyroa ambin'ny folo taona, nankeo ivohony ka nanendry ny somotraviavin-dambany.
21 Fa hoy izy anakampony: Na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko, dia ho sitrana aho.
22 Ary Jesosy nihodina ka nahita azy, dia nanao hoe: Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitranaanao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay.
27 Ary nony niala teo Jesosy, dia nisy jamba roa lahy nanaraka Azy sady niantsiantso hoe: Mamindrà fo aminay, ry Zanak'i Davida ô!
28 Ary rehefa niditra tao an-trano Izy, dia nanatona Azy ireo jamba; ary hoy Jesosy taminy: Mino va hianareo fa mahay manao izany Aho? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko.
35 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny synogoga sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra.
4 sy Tadeo; Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy.
5 Ireo roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiany hoe: Aza mandeha any amin'ny làlan'ny jentilisa, ary aza miakatra amin'izay tanànan'ny Samaritana,
7 Ary raha mandeha hianareo, dia mitoria hoe: Efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
8 Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.
11 Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantaro tsara izay mendrika ao; ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo.
12 Ary raha vao miditra ao amin'ny trano hianareo, dia miarahabà ny ao.
13 Koa raha mendrika ny ao an-trano, dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy mendrika izy, dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo.
14 Ary izay tsy hampandroso anareo, na tsy hihaino ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna izany hianareo, dia ahintsano ny vovoka amin'ny tongotrareo.
16 Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala.
17 Ary mitandrema hianareo noho ny amin'ny olona; fa hatolony ho amin'ny Synedriona sy hokapohiny ao amin'ny synagogany hianareo;
18 ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka hianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa.
19 Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo.
20 Fa tsy hianareo no miteny, fa ny Fanahin'ny Rainareo no miteny ao anatinareo.
22 Ary ho halan'ny olona rehetra hianareo noho ny anarako; fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena.
23 Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona, dia mandosira ho any amin'ny hafa; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy hahatapitra ny tanànan'ny Isiraely hianareo tsy akory mandra-pahatongan'ny Zanak'olona.
26 Koa amin'izany aza matahotra azy hianareo; fa tsy misy afenina izay tsy haseho, na takona izay tsy ho fantatra.
28 Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo.
29 Tsy varidimiventy ihany va no vidin'ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany, raha tsy avelan'ny Rainareo.
31 Koa aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo.
36 ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony.(Mik 7.6)
37 Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy mendrika ho Ahy, ary izay tia ny zanani-lahy na ny zanani-vavy mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy mendrika ho Ahy.
38 Ary izay tsy mitondrany hazo fijaliany ka tsy manaraka Ahy dia tsy mendrika ho Ahy.
1 Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nandidiany ny mpianany roa ambin'ny folo lahy, dia niala teo izy hampianatra sy hitori-teny any an-tanànan'ny olona.
4 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ka ambarao amin'i Jaona izao renareo sy hitanareo izao:
8 Sa hizaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soava? Indro, ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka.
10 Izy no ilay voasoratra hoe: " Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny làlanao eo alohanao" (Mal 3.1).
14 Ary raha mety mandray hianareo, dia izy no ilay Elia izay ho avy.
17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy hianareo, efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy niteha-tratra hianareo.
19 Tonga ny Zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin'ny asany.
21 Lozanao, ry Korazina! Lozanao, re Betsaida! Fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.
23 Ary hianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita hianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy.
27 Ny zavatra rehetra natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala tsara ny Zanaka, afa-tsy ny Ray; ary tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy ny Zanaka sy izay tian'ny Zanaka hanehoana Azy.
28 Mankanesa at? amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.
29 Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo.
7 Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe: "Famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra" (Hos.6.6), dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny hianareo.
10 ary, indro, nisy lehilahy matytànana teo. Ary ny olona nanontany Azy hoe: Mety va ny mahasitrana amin'ny Sabata? mba hiampangany Azy.
13 Dia hoy Izy tamin-dralehilahy: Ahinjiro ny tànanao. Dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray.
18 "Indro ny Mpanompoko, Izay nofidiko, Ny Malalako, Izay sitraky ny foko indrindra; Hapetrako ao aminy ny Fanahiko, Ary hitory ny rariny amin'ny jentilisa Izy;
19 Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dàlana;
21 Ary ny anarany no hitokian'ny jentilisa" (Isa.42.1.4).
30 Izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka.
31 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy samy hafa rehetra; fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina.
42 Ny mpanjakavavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy; fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy hihaino ny fahendren' i Solomona; nefa, indro, misy lehibe noho Solomona eto.
47 Ary nisy anankiray nanao taminy hoe: Indro, ny reninao mbamin'ny rahalahinao mijanona ato ala-trano mitady hiteny aminao.
48 Fa namaly Izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe: Iza moa no reniko ary iza no rahalahiko?
4 ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dàlana; dia avy ny vorona ka nandany azy.
9 Izay mana-tsofina, aoka izy hihaino.
11 Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela.
14 Dia tanteraka aminy ny faminanian' Isaia, izay manao hoe: " Handre mandrakariva ihany hianareo, fa tsy hahafantatra; Ary hijery mandrakariva ihany hianareo, fa tsy hahita;
15 Fa efa adala ny fon'izao olona izao. Ary efa lalodalovana ny sofiny, Ary efa nakimpiny ny masony, Fandrao hahita ny masony, Sy handre ny sofiny, Ka hahalala ny fony, Dia hibebaka izy, Ka hahasitrana azy Aho" ( Isa.6.9.10).
19 Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana, fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dàlana.
22 Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy.
23 Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala; dia izy no mamoa ka vokatra: ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enim-polo heny, ary ny sasany avy telo-polo heny.
29 Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsimparifary hianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary.
30 Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin'ny fararano; ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana ; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro.
33 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy hoe: Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelon'ny famarana, mandra-pahazon'ny masirasira azy rehetra.
35 mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: "Hiloa-bava hilaza fanoharana Aho; Hanambara zavatra izay nafenina hatrizay nanorenana izao tontolo izao Aho" ( Sal. 78.2).
36 Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano Izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: Lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsimparifary tany an-tanimbary.
43 Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny Rainy. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino.
45 Ary koa, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vato soa;
46 ary rehefa nahita vato soa izay saro-bidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy.
56 Ary ny anabaviny, moa tsy etỳ amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza no nahazoan' Ilehity izany zavatra rehetra izany?
3 Fa Heroda efa nisambotra an'i Jaona, dia namatotra azy ka nanao azy tao an-trano-maizina, noho ny tamin'i Herodiasy, vadin'i Filipo rahalahiny.
4 Fa Jaona efa nilaza taminy hoe: Diso hianao, raha manambady azy.
10 Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-trano-maizina izy.
13 Ary nony nandre izany Jesosy, dia niondrana an-tsambokely niala teo handeha hitokana any an-tany foana; ary raha nandre izany ny vahoaka, dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka Azy.
17 Fa hoy ny mpianany taminy: Tsy misy at? aminay, afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa.
18 Ary hoy Izy: Ento etỳ amiko izany.
19 Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy ka nisaotra; ary nony efa novakiny ny mofo, dia natolony ny mpianatra; ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka.
26 Ary nony nahita Azy nitsangantsangana ambonin'ny ranomasina ny mpianatra, dia raiki-tahotra ka nanao hoe: Matoatoa io; dia niantso izy noho ny tahotra.
29 Ary hoy Izy: Manatòna. Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy.
30 Fa raha nahita ny rivotra izy, dia natahotra, ary raha vao nilentika izy, dia niantso hoe: Tompo ô, vonjeo aho!
31 Ary naninjitra ny tànany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe: Ry kely finoana, nahoana no niahanahana hianao?
2 Nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana? Fa tsy mba manasa tànana izy, raha hihinan-kanina.
3 Ary Izy namaly ka nanao taminy hoe: Nahoana kosa hianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo?
4 Fa Andriamanitra efa nanao hoe: "Manajà ny rainao sy ny reninao" (Eks.20.12), ary koa: " Izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa" (Eks.21.17).
5 Fa hoy kosa hianareo: Na zovy na zovy no hilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: ' Efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazoanao soa avy amiko', dia tsy mba hanaja ny rainyakory izy.
8 " Ity firenena ity manaja Ahy amin'ny molony; Fa ny fony kosa lavitra Ahy.
9 Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy" (Isa.29.13).
19 Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonoan-olona, na fakam-badin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampanga lainga, ny fitenenan-dratsy,
20 izany no mahaloto ny olona; fa ny mihinana amin'ny tànana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona.
28 Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanani-vavy tamin'izay ora izay.
32 Ary Jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka nanao hoe: Mahonena Ahy ny vahoaka, fa efa nitoetra hateloana taty amiko izy izao ka tsy manan-ko hanina; ary tsy tiako ny hampody azy tsy mihinana, fandrao reraka eny an-dàlana izy.
33 Fa hoy ny mpianatra taminy: Aiza no hahitanay mofo at? an-efitra ampy hahavoky izao vahoaka betsaka izao!
3 Ary nony maraina, dia hoy hianareo: Ho ratsy ny andro, fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo.
6 Ary hoy Jesosy taminy: Mihevera, ka mitandrema hianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo?
8 Ary Jesosy nahalala izany, dia nanao hoe: Nahoana hianareo, ry kely finoana, no miara-misaina satria tsy manana mofo?
9 Tsy mbola mahafantatra va hianareo, ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo, ka firy harona moa no nangoninareo?
11 Ahoana no tsy ahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo .
12 Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy, fandrao azon'ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azon'ny fampianaran'ny Fariseo sy ny Sadoseo.
13 Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin' i Kaisaria-filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany Izy ka nanao hoe: Ataon'ny olona ho iza moany Zanak'olona?
15 Ary hoy Jesosy taminy: Fa hianareo kosa manao Ahy ho iza ?
17 Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Sambatra hianao, ry Simona Bar-jona; fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra.
18 Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy.
19 Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao etỳ ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao etỳ ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra.
23 Fa Izy nihodina ka niteny tamin'i Petera hoe: Mankanesa ato ivohoko, ry Satana; fahatafintohinana amiko hianao, satria tsy misaina izay an' Andriamanitra hianao, fa izay an'ny olona.
24 Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka Ahy.
3 Ary, indro, niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia, niresaka tamin'i Jesosy.
7 Ary Jesosy nankeo aminy, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mitsangàna, fa aza matahotra.
17 Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Ento at? amiko izy.
20 Ary hoy Jesosy taminy: Noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manana finoana hoatra ny voan-tsinapy iray aza hianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: Mifindrà er?, dia hifindra izy; ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao.
21 [Kanefa iny karazany iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina.]
24 Ary nony tonga tao Kapernaomy izy, dia nankeo amin'i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekelyva?
25 Dia hoy Petera: Mandoa ihany Izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe: Ahoana no hevitrao, ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka etỳ an-tany fadintseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va, sa avy amin'ny olon-kafa?
27 Nefa andrao isika manafintohina azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina hianao, ka manjonoa; ary raiso izay hazandrano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekelyeo hianao: dia raiso izany, ka omeo azy ho avy amiko sy hianao.
3 ka nanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy miova hianareo ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy hianareo.
6 Fa na zovy na zovy no hanafintohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino Ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha anantonana vato lehibe fikosoham-bary ny vozony, ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy.
8 Koa raha ny tànanao na ny tongotrao no manafintohina anao, tapaho izy ka ario ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tànana roa sy tongotra roa, nefa hariana any amin'ny afo maharitra mandrakizay.
9 Ary raha ny masonao no manafintohinana anao, esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa, nefa hariana any amin'ny helo mirehitra afo.
10 Mitandrema, fandrao manao tsinontsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny hianareo; fa lazaiko aminareo: Ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny Raiko Izay any an-danitra.
11 [Fa tonga ny Zanak'olona hamonjy ny very.]
12 Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato, ka mania ny anankiray, moa tsy hamela ny sivy amby sivi-folo eny an-tendrombohitra va izy ka handeha hitady ilay nania ?
13 Ary raha tàhiny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amby sivi-folo izay tsy nania.
14 Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny Rainareo Izay any an-danitra, raha ho very na dia izay aza amin'ireny madinika ireny.
15 Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesa any aminy, ka rehefa mitokana hianareo roa lahy, dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha mihaino anao izy, dia efa azonao ny rahalahinao;
16 fa raha tsy mihaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo ( Deo.19.15).
17 Ary raha tsy mety mihaino ireo izy, dia ambarao amin'ny fiangonana; ary raha tsy mety mihaino ny fiangonana koa izy, dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra izy.
19 Ary lazaoko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny Raiko Izay any an-danitra izany.
21 Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe : Tompoko, impiry moa no hanotan'ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Hatramin'ny impito va?
22 Fa hoy Jesosy taminy: Tsy lazaiko aminao hoe: Hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby fito-polo.
24 Ary raha vao nidinika izy, dia nisy anankiray nentina teo aminy, izay nitrosa talenta iray alina.
28 Nefa nony nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray, izay nitrosa denariazato taminy, dia nosamboriny izy ka notraohiny sady nataony hoe: Aloavy izay trosako aminao.
30 Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandoany ny trosa.
32 Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka noteneniny hoe: Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao, satria nifona tamiko hianao;
33 moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va hianao tahaka ny namindrako fo taminao?
35 Ary tahaka izany koa no hataon'ny Raiko Izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy hianareo.
1 Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia niala tany Galilia Izy ka nihazo ny làlana teny an-dafin'i Jordana, dia tonga tany amin'ny sisin'i Jodia.
3 Ary nisy Fariso nanatona Azy, dia naka fanahy Azy hoe: Mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny iampangany azy na inona na inona?
4 Ary Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mbola novakinareo va ny teny, fa Izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy (Gen.1.27), ka dia nanao hoe:
5 "Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa " (Gen.2.24)?
7 Hoy ireo taminy: Nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? (Deo.24.1).
14 Nefa Jesosy kosa nanao hoe: Avelao ny zaza, ary aza rarana tsy hanatona Ahy; fa an'ny toa azy ny fanjakan'ny lanitra.
16 Ary, indro, nisy anankiray nanatona Azy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, inona no tsara hataoko hahazoako fiainana mandrakizay?
17 Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana hianao, tandremo ny didy.
18 Hoy ralehilahy taminy: Inona avy moa? Dia hoy Jesosy: Ny hoe: "Aza mamono olona, Aza mijangajanga, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga,"
19 " Manajà ny rainao sy ny reninao " (Eks.20.12.16), ary: " Tiava ny namanao tahaka ny tenanao " (Lev.19.18).
21 Dia hoy Jesosy taminy: Raha tia ho tanteraka hianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao; ary avia hanaraka Ahy.
26 Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe: Tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
28 Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana, ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny Zanak'olona, hianareo koa, izay nanaraka Ahy, dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana roa ambin'ny folo ka hitsara ny firenen'Isiraely roa ambin'ny folo.
29 Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay.
1 Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano, izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony.
2 Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denaria isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanimboalobony ireny.
4 ka hoy izy taminy: Mandehana koa hianareo hankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay an-keviny marina dia homeko anareo. Ka dia lasa ireny.
5 Ary nivoaka tamin'ny ora fahenina ny fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa.
6 Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahiraika amibin'ny folo dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo, dia hoy izy taminy: Nahoana hianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro?
7 Hoy izy taminy: Satria tsy nisy olona nanakarama anay. Dia hoy ralehilahy taminy: Mandehana koa hianareo mankany amin'ny tanimboaloboka.
8 Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany: Antsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany: atombohy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany.
17 Ary Jesosy, nony niakatra ho any Jerosalema, dia naka mangingina ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy ka niteny taminy teny an-dàlana hoe:
19 ka hatolony amin'ny jentilisa mba hataony ho fihomehezana sy hokapohiny sy hohomboany amin'ny hazofijaliana; ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy.
22 Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: Tsy fantatrareo izay angatahinareo; hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroako? Hoy izy roa lahy taminy: Hainay ihany.
23 Hoy kosa Izy taminy: Hisotro amin'ny kapoakako tokoa hianareo; fa ny hipetraka eo an-tànako ankavanana sy eo an-tànako ankavia, dia tsy Ahy ny hanome izany; fa izay nanamboaran'ny Raiko izany no homena.
30 Ary, indreo, nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dàlana, ary nony reny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe: Mamindrà fo aminay, ry Tompo, Zanak'i Davida ô!
2 Mankanesa amin'iroa vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy hianareo; vahao izy, dia ento etỳ amiko.
5 "Lazao amin'i Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, Malemy fanahy sady mitaingina boriky, Dia zanaky ny boriky miasa "(Zak.9.9).
8 Ary ny ankabiazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dàlana; ary ny sasany nanapaka rantsan-kazo, dia nahahany teny an-dàlana koa izany.
9 Ary ny vahoaka izay nialoha Azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: Hosanaho an'ny Zanak'i Davida! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! Hosana any amin'ny avo indrindra (Sal.118.26).
11 Ary ny vahoaka nilaza hoe: Izao no Jesosy mpaminany, Izay avy any Nazareta any Galilia.
13 dia hoy Izy taminy: Efa voasoratra hoe: "Ny tranoko hatao hoe trano fivavahana " ( Isa.56.7); fa hianareo kosa manao azy ho "zohy fieren'ny jiolahy " (Jer.7 .11).
15 Fa nony hitan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantso eo an-kianjan'ny tempoly ka manao hoe: Hosana ho an'ny Zanak'i Davida!-dia tezitra izy
16 ka nanao taminy hoe: Renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy: Eny; tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe: "Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana "( Sal 8.2)?
19 Ary nahita hazo aviavyanankiray teo amoron-dàlana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy.
21 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manam-pinoana hianareo ka tsy miahanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no ho vitanareo, fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza hianareo ka hanao hoe: Mifindrà hianao, ka mianjerà any an-dranomasina, dia ho tonga izany.
24 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha ary raha hovalianareo izany, Izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany:
25 Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-nisainaka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka nahoana no tsy nino azy hianareo?
28 Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy; dia nankeo amin'ny lahimatoa izy ka nanao hoe: Anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboaloboko anio.
30 Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: Handeha aho, tompoko, kanjo tsy nandeha izy.
32 Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny làlan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy hianareo; fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy; fa hianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo azy.
33 Mihainoa fanoharana hafa koa: Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanimboaloboka, dia namefy azy manodidina, dia nihady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia nahofany tamin'olona mpiasa tany izany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy.
39 Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka, dia namono azy.
40 Koa raha tonga ny tompon'ny tanimboaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa tany izany?
41 Hoy izy taminy: Hataony loza tokoa ny handringanany izany olon-doza izany, ary ny tanimboaloboka dia hahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy.
42 Hoy Jesosy taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin'ny Soratra Masina hoe: "Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano , Dia izy no efa natao fehizoro; Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika" ? (Sal.118.22 .23).
44 Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa na zovy na zovy no hianjerany, dia ho mongomongo.
2 Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanani-lahy.
4 Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin'izay efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa at? amin'ny fampakaram-bady hianareo.
8 Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy mendrika.
9 Koa mankanesa hianareo any amin'ny sampanan-dàlana, ary izay hitanareo any amin'ny sampanan-dàlana, dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady.
10 Dia nivoaka ho any amin'ny làlana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady.
12 Dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa hianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy.
13 Ary dia hoy mpanjaka tamin'ny mpanompony: Afatory ny tongony aman-tànany, dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
14 Fa maro ny antsoina, nefa vitsy no fidina.
15 Ary tamin'izay dia lasy ny Fariseo ka niara-nisaina mba hamandrika Azy amin'ny teniny.
16 Dia naniraka ny mpianany mbamin'ny Herodiana hankeo aminy izy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, fantatray fa marina Hianao ka mampianatra marina ny làlan'Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizaha tavan'olona.
18 Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany, dia nanao hoe: Nahoana no maka fanahy Ahy hianareo, ry mpihatsaravelatsihy?
24 Mpampianatra ô, Mosesy nilaza hoe: Raha misy maty momba, aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny ka hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny (Deo.25.5).
25 Koa nisy fito mirahalahy tetỳ aminay; ary ny zokiny nampaka-bady, dia maty, ary satria tsy nanan-janaka izy, dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny:
30 Fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba hisy hampaka-bady, na havoaka hampakarina, fa ho tahaka ny anjelyany an-danitra izy.
32 " Izaho no Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'Isaka ary Andriamanitr'i Jakoba " ( Eks.3.6)? Andriamanitra tsy an'ny maty, fa an'ny velona.
34 Fa ny Fariseo, nony nandre fa nampahasìna ny Sadoseo Izy, dia niangona.
37 Dia hoy Jesosy taminy: "Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra" ( Deo.6.5).
39 Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: "Tiava ny namanao tahaka ny tenanao" ( Lev.19.18).
42 Ahoana no hevitrareo any amin'i Kristy? Zanak'iza moa Izy? Hoy izy taminy: Zanak'i Davida.
43 Hoy Jesosy taminy: Koa nahoana ary Davida amin'ny Fanahy no manao Azy hoe: "Tompo", ka manao hoe:
44 "Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanàko ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao" (Sal.110.1)?
45 Koa raha Davida ary manao Azy hoe "Tompo", ahoana no maha-zanany Azy?
4 Eny, mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny rantsan-tànany anankiray aza.
5 Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona; fa ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny somotraviaviny.
8 Fa hianareo kosa aza mba mety hatao hoe: Raby ô; fa iray ihany no Mpampianatra anareo, ary hianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa.
9 Ary aza milaza olona etỳ an-tany ho rainareo; fa iray ihany no Rainareo, dia Izay any an-danitra .
10 Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika hianareo; fa iray ihany no Mpitarika anareo, dia Kristy.
12 Fa izay manandra-tena no haetry; ary izay manetra tena no hasandratra.
13 Fa lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! Fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra; fa hianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra.
14 [Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa laninareo ny tranon'ny mpitondratena, ary dia manao vavaka lavareny mba ho fiolahana hianareo; koa izany no hahazoanareo fahamelohana mafimafy kokoa.]
15 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina hianareo mba hahazoanareo na dia iray ihany aza ho proselyta; ary rehefa azonareo izy, dia ataonareo zanaky ny helo mihoatra indroa noho hianareo aza.
16 Lozanareo, mpitarika jamba izay manao hoe: Raha misy mianiana amin'ny tempoly, dia tsy mampaninona izany; fa raha misy mianiana amin'ny volamena amin'ny tempoly, dia haningo-tena izy;
21 Ary izay mianiana amin'ny tempoly dia mianiana aminy mbamin' Izay mitoetra ao anatiny.
22 Ary izay mianiana amin'ny lanitra dia mianiana amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mbamin' Izay mipetraka eo amboniny.
23 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina hianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.
26 Ry Fariseo jamba ! diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia, mba ho madio koa ny vohony.
27 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy ! fa hianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mbamin'ny faholotoana rehetra.
28 Dia tahaka izany koa hianareo: raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fihatsarambelatsihy sy tsi-fankatoavan-dalàna.
29 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy ! fa manao ny fasan'ny mpaminany hianareo sady manisy haingony ny rarivatom-pasan'ny olona marina,
30 ka hoy hianareo: Raha niara-belona tamin'ny razanay izahay, dia tsy mba nikambana taminy handatsa-dra ny mpaminany.
31 Ka dia miampanga tena hianareo fa zanak'izay namono ny mpaminany.
32 Ary hianareo koa dia mamenoa ny famaran'ny razanareo.
34 Ary noho izany, indro, Izaho maniraka mpaminany sy olon-kendry ary mpanora-dalàna ho at? aminareo; koa ny sasany hovonoinareo sy hohomboanareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany hokapohinareo ao amin'ny synagoganareo sy henjehinareo mitety vohitra-
35 mba hanody anareo ny ra marina rehetra, izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny ran' i Abela marina ka hatramin'ny ran' i Zakaria, zanak'i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara.
37 Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina ho aminao, impiry Aho no ta-hanangona ny zanakao, tahaka ny fanòmban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety hianareo!
39 Fa lazaiko aminareo: Hatramin'izao dia tsy hahita Ahy tokoa hianareo mandra-pilazanareo hoe: Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.
2 Fa Izy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana.
4 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mitandrema, fandrao hisy hamitaka anareo,
6 Ary handre ady sy filazana ady hianareo; koa mitandrema, aza matahotra; fa tsy maintsy ho tonga izany; nefa tsy mbola tonga ny farany.
8 Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana.
9 Ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana hianareo ka hovonoiny; ary ho halan'ny firenena rehetra hianareo noho ny anarako.
14 Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.
15 Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina "ny fahavetavetan'ny fandravana" izay nampilazaina an'i Daniela mpaminany (Dan.12.11.9.27) (aoka hisaina izay mamaky izany),
20 Fa mivavaha hianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny Sabata no handosiranareo.
23 Koa raha misy manao aminareo hoe: Indro, at? Kristy, na: Indro, ar?; aza mino hianareo.
26 Ary amin'izany, raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mankany hianareo; Indro, ao amin'ny efi-trano Izy, aza mino.
31 Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.
32 Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy: Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona.
33 Dia tahaka izany koa hianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo am-baravarana Izy.
38 Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny Safo-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoaka ny ampakarina, mandra-pihavin'ny andro izay nidiran' i Noa tao amin'ny sambo-fiara,
39 ary fantany mandra-pihavin'ny Safo-drano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihavian'ny Zanak'olona.
42 Koa amin'izany miambena hianareo; fa tsy fantatrareo izay andro hihavian'ny Tomponareo.
44 Koa miomàna kosa hianareo; fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hihavian'ny Zanak'olona.
49 ka dia nikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo,
51 dia hotapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny mpihatsaravelatsihy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
1 Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijina folo, izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra.
3 Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza;
4 ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany.
6 Ary nony mamatonalina, dia nisy antso hoe: Indry ny mpampakatra! mivoaha mba hitsena azy.
7 Dia nitsangana ireo virijina rehetra ireo, ka samy namboatra ny fanalany.
8 Dia hoy ny adala tamin'ny hendry: Mba omeo kely amin'ny solikareo izahay; fa efa ho faty ny fanalanay.
9 Fa ny hendry namaly ka nanao hoe: Sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra hianareo, ka mividiana ho anareo.
11 Ary rehefa afaka izany, dia tonga kosa ireo virijina teo ka nanao hoe: Tompoko, tompoko, vohay izahay.
12 Fa izy namaly hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy fantatro hianareo.
13 Koa amin'izany miambena hianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.
14 Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany;
15 koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray-samy araka izay fahaizany avy; dia lasa nandeha izy.
16 Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta dimy, ka nataony varotra izany; ary nahazo tombony talenta dimy koa izy?
18 Fa ilay nandray ny izay kosa dia lasa nihady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony.
20 Ary nony nanatona ilay nandray ny talenta dimy, dia nitondra talenta dimy koa izy ka nanao hoe: Tompoko, talenta dimy no natolotrao ahy: indro, nahazo tombony talenta dimy koa aho.
21 Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky ; nahatoky tamin'ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin'ny fifalian'ny tomponao.
23 Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin'ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin'ny fifalian'ny tomponao.
24 Fa nony nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray, dia nilaza hoe: Tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary hianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao, ary manangona eny amin'izay nanahafanao;
27 koa tokony ho nampanàna ny volako tamin'ny mpanàna vola hianao, ka raha tonga aho, dia ho nandray ny ahy mban-janany.
32 ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany, dia hanavaka azy Izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy;
33 ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany Izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany.
34 Ary amin'izany ny Mpanjaka dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: Avia hianareo izay notahin'ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao;
36 tsy nanan-kitafy Aho, dia notafianareo; narary Aho, dia notsaboinareo; tao an-trano-maizina Aho, dia novangianareo.
37 Ary hamaly Azy ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana Hianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroinay?
39 Ary oviana no hitanay narary Hianao, na tao an-trano-maizina, ka novangianay?
41 Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, hianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny;
43 nivahiny Aho, fa tsy mba nampiantranoinareo; tsy nanan-kitafy Aho, fa tsy mba notafianareo; narary sy tao an-trano-maizina Aho, fa tsy mba novangianareo.
44 Ary dia hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana Hianao, na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tao an-trano-maizina, ka tsy mba nanompo Anao izahay?
46 Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay: fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay.
2 Fantatrareo fa raha afaka indroa andro, dia ho tonga ny Paska, koa ny Zanak'olona dia hatolotra hohomboana amin'ny hazofijaliana.
6 Ary nony tany Betania Jesosy, tao an-tranon' i Simona boka,
10 Ary fantatr'i Jesosy izay nataon'ireo, ka dia hoy Izy taminy: Nahoana hianareo no mampalahelo an-dravehivavy? fa asa soa no nataony amiko.
17 Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: Aiza no tianao hamboarinay hihinananao ny Paska?
20 Ary nony hariva ny andro, dia nipetraka nihinana Izy mbamin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy.
22 Dia nalahelo indrindra izy rehetra, ka samy nanontany hoe: Moa izaho va izany, Tompoko?
27 Ary nandray kapoaka Izy, ka nony efa nisaotra, dia natolony azy ka nataony hoe: Sotroinareo rehetra ity;
28 fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka.
31 Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy: Hianareo rehetra dia ho tafintohina noho ny amiko anio alina; fa voasoratra hoe: "Hamely ny mpiandry Aho, dia hihahaka ny ondry andrasana " (Zak.13.7).
34 Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo hianao.
36 Ary Jesosy mbamin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane, ary hoy Izy tamin'ny mpianany: Mipetraha eto aloha hianareo, raha mbola mankeroa hivavaka Aho.
37 Ary nitondra an'i Petera mbamin'izay roa lahy zanak'i Zebedio Izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra.
38 Dia hoy Izy taminy: Fadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty; mitoera eto, ka miaraha miaritory amiko.
40 Ary nankeo amin'ny mpianatra Izy ka nahita azy matory, dia hoy Izy tamin'i Petera: Hay! tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko na dia ora iray ihany aza hianareo!
41 Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery.
42 Dia nandeha fanindroany Izy ka nivavaka hoe: Raiko ô, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy hosotroiko,dia aoka ny sitraponao no hatao.
45 Dia nankeo amin'ny mpianatra Izy ka nanao taminy hoe: Matoria ary ankehitriny, ka mialà sasatra hianareo ; indro, efa akaiky ny ora, ary ny Zanak'olona hatolotra eo an-tanàn'ny mpanota.
50 Fa hoy Jesosy taminy: Ry sakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana Azy.
55 Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy hisambotra Ahy toy ny hisambotra jiolahy va hianareo? Isan-andro dia nipetraka nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly Aho, nefa tsy nisambotra Ahy hianareo.
59 Ary ny lohan'ny mpisorona mbamin'ny Synedriona rehetra nitady teny ho entiny hiampangana lainga an' i Jesosy mba hamonoany Azy;
60 fa tsy nahita izy, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo, izay nanao hoe:
61 Ilehity nanao hoe: Mahay mandrava ny tempolin' Andriamanitra Aho sy manangana azy amin'ny hateloana.
63 Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisoronabe taminy: Ampianianiko amin'Andriamanitra velona Hianao hilaza aminay, raha Hianao no Kristy, Zanak' Andriamanitra.
64 Hoy Jesosy taminy: Voalazanao; ary koa, lazaiko aminareo: Hatramin'izao dia ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo amin'ny tànana ankavanan'ny Hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra.
65 Ary tamin'izany ny mpisoronabe dia nandriatra ny fitafiany ka nanao hoe: Efa niteny ratsy Izy; ahoana no mbola ilantsika vavolombelona indray? indro, efa renareo izao fitenenan-dratsy izao.
66 Ahoana no hevitrareo? Ary ireo namaly ka nanao hoe: Mendrika hohelohina ho faty Izy.
67 Dia nororany ny tavany, ka nasiany totohondry Izy; ary ny sasany namely tahamaina Azy
69 Ary Petera nipetraka teo ivelany, teo an-kianja, dia nanatona azy ny ankizivavy anankiray ka nanao hoe: Hianao koa nomba an' i Jesosy, ilay Galiliana.
73 Ary nony afaka kelikely, dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'i Petera hoe: Marina tokoa fa naman'ireny hianao; fa ny fiteninao miampanga anao.
75 Ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy, izay nolazainy hoe: Raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo hianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy, dia nitomany fatratra.
1 Ary nony maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampanga an' i Jesosy mba hamonoany Azy.
4 ka nanao hoe: Nanota aho, satria, namadika ra marina. Fa hoy ireo : Ahoanay izany? fa asa anao.
6 Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe: Tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny tempoly io, fa vidin-dra.
8 Koa izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandraka androany hoe: Sahan-dra.
9 Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe: "Dia nalainy ny sekely volafotsy telo-polo, vidin'ilay notombanana, dia ilay notombanan'ny Zanak'Isiraely,
10 ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany, araka izay efa nandidian'i Jehovah ahy" (Jer.18. 2; Zak.11.13).
19 Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka hankeo aminy ka nanao hoe: Aza manao na inona na inona amin'izany Lehilahy marina izany, fa nampahory ahy be ihany ny nanofisaka Azy any naraina.
20 Ary no lohan'ny mpisorona mbamin'ny loholona nitaona ny vahoaka mba hangataka an'i Barabasy ary hamono an'i Jesosy.
22 Hoy Pilato taminy: Ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy, Izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: Aoka hohomboana amin'ny hazofijaliana Izy.
23 Fa hoy ny governora: Inona ary no ratsy nataony? Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe: Aoka hohomboana amin'ny hazofijaliana Izy!
24 Ary raha hitan'i Pilato, fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao mainka nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tànana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: Afaka amin'ny ran' ity Lehilahy marina ity aho, fa asa anareo.
25 Ary ny olona rehetra dia namaly ka nanao hoe: Aoka ny rany ho aminay mbamin'ny zanakay.
26 Ary dia nandefa an'i Barabasy ho an'ny olona izy; fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony mba hohomboana tamin'ny hazofijaliana.
27 Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho ao anati-rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy.
30 Dia nororany Izy, ary nalainy ny volotara, ka nokapohiny ny lohany.
31 Ary rehefa naneso Azy izy, dia nanala ilay lamba taminy, ka nampitafiny Azy indray ny fitafiany, ary dia nentiny Izy mba hohomboana amin'ny hazofijaliana.
32 Ary raha nandeha izy, dia nahita lehilahy Kyreniana anankiray, atao hoe Simona, ka izy notereny hitondra ny hazofijalian'i Jesosy.
35 Ary rehefa voahombony tamin'ny hazofijaliana Izy, dia nanaovany loka ny fizàrany ny fitafiany.
37 Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana Azy, dia izao: ITY NO JESOSY, MPANJAKAN' NY JIOSY.
38 Ary nisy jiolahy roa nohomboana tamin'ny hazofijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany, ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany.
39 Ary izay nandalo dia niteny ratsy Azy, sady nihifikifi-doha
40 ka nanao hoe: Ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny hateloana, vonjeo ny tenanao. Raha Zanak'Andriamanitra Hianao, midìna hiala amin'ny hazofijaliana.
42 Ny sasany novonjeny; fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'ny Isiraely Izy, aoka hidina hiala amin'ny hazofijaliana Izy ankehitriny, dia hino Azy izahay;
43 natoky an' Andriamanitra Izy, aoka Izy hamonjy Azy ankehitriny, raha ankasitrahany Izy ( Sal.22.8), satria hoy Izy: Zanak'Andriamanitra Aho.
44 Ary nandatsa Azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nohomboana taminy tamin'ny hazofijaliana.
46 Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: " Ely, Ely, lamà sabaktany? " izany hoe: "Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? " ( Sal.22.1).
47 Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo, raha nandre izany, dia nanao hoe: Miantso an' i Elia Ilehio.
48 Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia nihazakazaka ka nandray sipaonjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notohiziny tamin'ny volotara, dia natohony hotsentsefin'i Jesosy.
50 Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny.
53 ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsanganan'i Jesosy, dia nankao amin'ny Tanàna Masina ka niseho tamin'ny maro.
54 Ary ny kapiteny sy ny fehiny, izay niambina an' i Jesosy, raha nahita ny horohoron-tany mbamin'izay zavatra tonga teo, dia raiki-tahotra indrindra ka nanao hoe: Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra io Lehilahy io.
56 Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria, renin'i Jakoba sy Josesy, ary renin'ny zanak'i Zebedio.
58 Izany lehilahy izany dia nankao amin'i Pilato ka nangataka ny fatin' i Jesosy. Dia nasain'i Pilato homena azy izany.
60 dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao, izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy; ary rehefa nanakodia vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha.
62 Ary nony ampitson'ny andro fiomanana, dia nivory nankeo amin' i Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny Fariseo
1 Ary tamin'ny alin'ny Sabata, raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy hizaha ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray.
3 Ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny orampanala;
5 Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe: Aza matahotra hianareo; fa fantatro fa Jesosy, Izay efa nohomboana tamin'ny hazofijaliana, no tadiavinareo.
11 Ary nony nandeha izy ireo, indreny, ny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho.
13 ary nanao hoe: Lazao hoe: Ny mpianany no tonga alina ka nangalatra Azy, raha sendra natory izahay;
19 koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina
Retrieved from "https://wikisource.org/w/index.php?title=Matio_(evanjily)&oldid=330406"
This page was last edited on 24 March 2012, at 21:37.